Abantu bokufika abagonywe ngokuphelele bangavakashela eSydney kusukela ngoNovemba 1
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Australia Izindaba Ezintsha » Abantu bokufika abagonywe ngokuphelele bangavakashela eSydney kusukela ngoNovemba 1
I-Australia Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
UNdunankulu waseNew South Wales (NSW) uDominic Perrottet
UNdunankulu waseNew South Wales uthe sekuyisikhathi sokuvula ukuze kusizakale ukuvuselela umnotho, osonakaliswe kabi wumbuso osusondele ezinyangeni ezine we-COVID-19.
I-Australia ivale imingcele yayo ngoMashi 2020 iphendula ubhadane lwe-COVID-19 emhlabeni wonke.
ENew South Wales, inani labantu abagonywe ngokuphelele selifinyelele kuma-77.8%, kanti ama-91.4% athole okungenani umthamo owodwa womuthi wokugoma i-COVID-19.
Umnotho waseNew South Wales ulimale kabi ngenxa yokuvaleka kwawo phansi kwezinyanga ezine i-COVID-19.
UNdunankulu waseNew South Wales (NSW) uDominic Perrottet umemezele namuhla ukuthi Sydney izovulela izivakashi zakwamanye amazwe ezigonywe ngokuphelele, ngaphandle kwemfuneko yokuhlukaniswa nokuhlukaniswa, kusukela ngoNovemba 1, 2021.
“Sidinga ukujoyina kabusha umhlaba. Asikwazi ukuhlala lapha embusweni wedwa. Kumele sivule umlomo, ”kusho umholi wezwe elinabantu abaningi e-Australia ngoLwesihlanu.
I-Australia ivale imingcele yayo ngo-Mashi 2020 iphendula ubhadane lwe-COVID-19, ivumela ukungena cishe kuphela kuzakhamizi nakwabahlali abahlala unomphela abacelwe ukuthi bathole ukuhlukaniswa kwehhotela amasonto amabili ngezindleko zabo.
UNdunankulu wase-Australia uScott Morrison uthe ekuqaleni kwalenyanga uhambo lwaphesheya kwezilwandle luzobuya uma abantu abangu-80% esifundazweni esithile begonywe ngokuphelele, kodwa ekuqaleni luzotholakala kubantu base-Australia futhi luzodinga ukuvalelwa ekhaya.
ENew South Wales, inani labantu abagonywe ngokuphelele selivele lafinyelela kuma-77.8%, kanti ama-91.4% athole okungenani umthamo owodwa womuthi wokugoma i-COVID-19.
Kodwa-ke, uNdunankulu we-NSW uthe sekuyisikhathi sokuthi kuvulwe ukusiza ukuvuselela umnotho, osonakaliswe kakhulu wukuvalwa umbuso okusondele ezinyangeni ezine ze-COVID-19.
"Ukuhlukaniswa kwehhotela, ukuvalelwa ekhaya yinto yakudala, sivulela iSydney neNew South Wales umhlaba wonke," kusho uPerrottet.
Ngokusho kukaPerrottet, labo abafika ku- Sydney kuzofanele kuqala akhombise ubufakazi bokugoma kanye nohlolo olubi lwe-COVID-19 ngaphambi kokugibela indiza eya e-Australia.
Ukususwa kwezidingo zokuhlukaniswa nabanye kuzosiza ukuhambela amazwe omhlaba kuya e-Australia futhi kungenzeka kwamukelwe amashumi ezinkulungwane zabantu base-Australia ababhajwe phesheya kwezilwandle ngenxa yenqubomgomo. Kubuye kube nezilinganiso eziqinile enanini lezindawo ezitholakalela abahambi ababuyiselwe ukuhlala ehhotela.
Okwamanje, i Inhlangano Yezokwelapha yase-Australia, emele odokotela bezwe, ngoLwesihlanu uxwayise ukuthi ukumodeliswa kwayo kukhombisa ukuthi uhlelo lwezempilo lwaleli lizwe ngeke lukwazi ukubhekana nokutheleka kweziguli ze-coronavirus ngemuva kokuvulwa kwezwe.